Maxaa ka jira in Mid ka mid ah Musharaxiinta Madaxweyne uu u tanaasulayo Madaxweyne Xasan ? - iftineducation.com ≡Navigasi Menu
→ Maxaa ka jira in Mid ka mid ah Musharaxiinta Madaxweyne uu u tanaasulayo Madaxweyne Xasan ?
Maxaa ka jira in Mid ka mid ah Musharaxiinta Madaxweyne uu u tanaasulayo Madaxweyne Xasan ?
iftineducation.com - Musharaxa Cabdullaahi Cali Axmed oo loo yaqaan Caddow Cali Gees kana mid ah Ragga ugu cad-cad musharaxiinta u tartameysa xilka Madaxweynenimo ayaa si weyn u beeniyey war baraha internetka qaarkood lagu faafiyey oo sheegayey inuu ka tanaasulayo tartanka doorashada taasoo uu ku tilmaamay war aan sal iyo raad toona laheyn.
Hadal ka soo baxay Xafiiska Ololaha Doorashadda ee Murashax Madaxweyne Caddow Cali Gees ayaa lagu beeniyey wararka sheegaya inuu Murashaxaasi heshiis la gaaray Musharax Xasan Sheekh Maxamuud iyo inuu ka tanaasuli doono Tartanka Doorashadda Madaxtinimadda Somalia.
Afhayeenka Xafiiska u ololeynaya Murashax Madaxweyne Caddow Cali Gees oo la hadlay saxaafada ayaa gaashaanka ku dhuftay arrintaasi oo ay qaar ka mid ah Saxaafadda qoreen.
“Marnaba lagama yaabo inuu Murashax Caddow Cali Gees u tanaasulo Murashax Xasan Sheekh Maxamuud, waxna kama jiraan inay ka wada hadleen qodobkaasi” ayuu yiri Afhayeenkaasi oo intaasi sii raaciyey in shaqsiyaadka u ololeynaya Musharax Xasan Shiikh faafiyeen Borobogaandadaasi, iyadoo dhinaca kale Warbaahinta loo qeybiyey war-saxaafadeed ka soo baxay Caddow Cali Gees oo u qornaa sidatan:- Waa Ka Mamnuuc Cayda iyo Qabyaaladda, Waxeey ufurantahay Kaliya Fikir Isweedaarsi Mahadsanidiin Newer Post